Baarlamaan - Gpedia, Your Encyclopedia
Barlamaanka waa meel xukun dowladeed lagu sameeyo. waa meel siyaaiinta ku kulmaan. Baarlamaan waa goobta ugu sareysa ee Sharci dejinta dawlada halkaas oo lagu abuuro xeer kadibna lagu ansixiyo ama lagu meel mariyo sharci ay soo abuurtay qaybta fulinta ee dawladu. Badanaa meel marinta qawaaniinta distooriga ahi waxay u dhacdaa qaab gacan taag ah. soomaaliya maanta malahan wax baarlamaan ah, waxaana jiro qaar is xil saaray oo gaaraayo wax ka badan 500, mararka qaar neh wee is qabqabsadaan. baarlamaankii hore waxoo ahaa, baarlamaan caalami ah oo aad u weyn, waxoo ahaa, mid labo dabaq ah oo si casri ah loo dhisay. baarlamaankii hore ee soomaaliya waxaa ka shaqeen jiray dad wadaniyiin ah, oo runtii ku fikirin jeebkooda balse umada soomaaliyeed.kuwa maanta jiro waa kuwo jahwareersan oo runtii aqoon dhinac loo wado Siyaasadda baarlamaanka.
baarlamaanka sidiisaba waa sharci dajin, waxeena u kala baxaan xisbiyo. soomaaliya maanta malahan xisbiyo dowli ah, sababtoo ah, waa wadan dhibaato ka jirto, laakiin waxaa lagu shaqo jiraa sameynta xisbiyada dalka.
baawlamaan aanu baah neyn
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Baarlamaan&oldid=198861"